Trinity and Moksha: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ၂ Linux မှ
အပေါ်ဆောင်းပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရီးဆက်လက် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစုံနှင့်ကြီးထွားလာအပေါ်တည်ဆဲ GNU / Linux Distros, ယခုအနည်းငယ်ခေါ်, လူသိများသို့မဟုတ်လူကြိုက်များ2၏အလှည့် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ y ပါတိမောက္ခသံဝရ.
နှစ် ဦး စလုံး၏အနကျအဓိပ်ပါယျ (ချိတ်) အဟောင်း Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ခေတ်မီ အချို့အပေါ် operating ဆက်လက်ရန် GNU / Linux Distros သို့မဟုတ်အများအပြား, အထူးသဖြင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်း၏အလားအလာ၏အားသာချက်ယူနိုင်ရန်အတွက် သယံဇာတသုံးစွဲမှုနည်းခြင်း (RAM, CPU).
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Desktop Environments ၁ ခုထက် ပို၍ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်ကျယ်ပြန့်သည် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်လူသိအများဆုံးသို့မဟုတ်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြသည် (GNOME, KDE Plasma, Xfce, သစ်ကြမ်းပိုး, အိမ်ထောင်ဖက်, LXDE y LXQT, နှင့်အခြားသူများကိုလူသိနည်းသော်လည်းနည်းနည်းခေတ်မီပြီးအသုံးဝင်သည်။Deepin, Pantheon y Budgie).
ထိုအပေမယ့်, ဒီရေတွက် ယခင် 10 Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များပိုပြီး သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ y ပါတိမောက္ခသံဝရ, အညီအမျှစိတ်ဝင်စားဖို့သို့မဟုတ်ဒီကဗျာအချို့သိရန်, စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကြိုးစားနေဆဲရှိသေး၏။
1 Trinity နှင့် Moksha: Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
1.1 သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ Desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင်
1.1.2 သော့ချက် features တွေ
Trinity နှင့် Moksha: Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ Desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင်
El Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ကိုခေါ် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ Desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင် (TDE) ၎င်း၏ developer များအဆိုအရ၎င်းသည်ဖန်တီးပြီးဖြစ်သည်။ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Operating Systems အဟောင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အမြင်အာရုံကိုထိန်းသိမ်းရန်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အထူးသ, TDE Desktop Environment ကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့် (သို့) ထောက်ပံ့ရန်ရှာသည်
၎င်းသည် hardware အဟောင်းများကိုတုန့်ပြန်ပြီး hardware အသစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
3D acceleration ကိုထောက်ပံ့သည်။ သို့သော် libertesktop.org နှင့် Linux file system အဆင့်အတန်းစံချိန်စံညွှန်းများအပြင်အခြား desktop ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်အတူ XNUMXD acceleration မလိုအပ်ပါ။
မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အမြင့်ဆုံး HCI (Human-Computer Interaction) ထိရောက်မှုကိုပေးနိုင်သည်။
သောစေဝိသေသလက္ခဏာများအနက် TDE ဖော်ပြနိုင်ပါသည်
ရိုးရာ panel တစ်ခု၊ taskbar တစ်ခု၊ task manager နှင့် application အမြန်ဖွင့်ရန်။
အမျိုးမျိုးသောစာသားအယ်ဒီတာများ၊ ဖိုင်မန်နေဂျာ၊ ရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများ၊ ရုံးသုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ ဖိုင်မန်နေဂျာနှင့် Amarok ၏မူလနှင့်တိုးတက်လာသော Amarok ဂန္ထဝင်ဂီတစက်များအပါအဝင်သဟဇာတဖြစ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးချပရိုဂရမ်များ။
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော login နှင့် desktop lockout dialogs ။
Firefox နှင့် NetworkManager (HAL အတွက်မလိုအပ်) စသည့်အသုံးများသော application များနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်သီးခြား DBUS သတိပေးချက် client ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
TDE တစ် ဦး ဆက်လက်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည် K Desktop Environment (KDE) ဗားရှင်း ၃။ နာမည် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ (ထရီနီဒက်၊ စပိန်ဘာသာဖြင့်) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်“ သုံး” နှင့်“ သုံး” ဟူသောစကားလုံးကိုဆိုလိုသည် TDE တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် KDE ၄.၉. TDE ယခုသင့်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းဖြစ်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ကွန်ပျူတာများအတွက်။ စီမံကိန်း TDE တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်အားဖြင့် run ခံရဖို့ဆက်လက်ခဲ့သည် တိမောသေ Pearson, သူသည်တစ်ချိန်ကညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည့်ကျွမ်းကျင်သောအတွေ့အကြုံရှိသော software developer ဖြစ်သည် KDE 3.x ၏ယခင်ဗားရှင်းကနေ Kubuntu.
TDE ကဲ့သို့သောတိကျတဲ့ Distro အတွက်မလာပါဘူး Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် default အနေဖြင့်သော်လည်း Distros အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် Altlinux, Exe GNU / Linux၊ PCLinuxOS, Q4OS, ပျော့ပျောင်းသော နှင့်အချို့ဗားရှင်း Ubuntu ကို။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လက်ရှိတွင်မူဗားရှင်း R14.0.7 ကို ၁၂/၃၀၁၉ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက TDE မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အောက်ပါ link ကိုမှာ။
El Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ကိုခေါ် ပါမောက္ခဒက်စ် (MD) ၎င်း၏ developer များအဆိုအရ၎င်းသည် Windows Manager ၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အမြင်အာရုံရှုထောင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် သစ္စာဉာဏ်အလင်း ၁၇ (E17) အရာမကြာခဏတစ်စဉ်းစားသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းဖြင့်၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်၊ အသစ်တဖန်လုပ်ရန်နှင့်နောင်လာမည့်ဗားရှင်းများ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီစေရန်ပြုလုပ်ရန် သစ္စာဉာဏ်အလင်း၎င်းမှဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည့်ဝက်၊ E17 ပါရှိသည်။
အထူးသ, MD Desktop Environment ကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့် (သို့) ထောက်ပံ့ရန်ရှာသည်
Bodhi GNU / Linux ပေါ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Distro ဖြစ်သောပြောင်းလဲမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ E17 ၏အဆက်ကိုဆက်လက်ထားပါ။
၎င်းတွင် E18 နှင့် E19 တို့၏အကောင်းဆုံး၊ ခေတ်သစ်နှင့်အသုံးဝင်ဆုံးသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၊ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှယူဆသောအသစ်သောအရာများ။
နောက်ပိုင်း Enlightenment ဗားရှင်းများထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးလုပ်ဆောင်ရန် RAM လျော့နည်းသည်။
၎င်း၏မိခင် Distro၊ Bodhi GNU / Linux ထက်ကျော်လွန်သော Linux အခြေပြုပလက်ဖောင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သော Desktop တစ်ခုဖြစ်ပါ။
သို့သျောလညျး MD ယခုအတွက်သာအလွယ်တကူအတွက်ထောက်ခံသည် DEBIAN 8 (ဂျက်စီ)၎င်း၏တီထွင်သူသည်၎င်း၏အထုပ်ကိုခေတ်မီအောင်မစီမံနိုင်သရွေ့၎င်းသည်ပိုမိုခေတ်မီသောဗားရှင်းများနှင့်လိုက်ဖက်စေရန် DEBIAN GNU / Linux။ MD အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်သည်သူ၏လူနာထံသို့သွားနိုင်ပါသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အောက်ပါ link ကိုမှာ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Trinity y Moksha»,2«Entornos de Escritorio» အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားဖို့, သူတို့ရဲ့အတွက် «Distros GNU/Linux» ပိုကောင်းအဖြစ်လူသိများအခြားသူများမှဇာတိသို့မဟုတ် ported «DEBIAN GNU/Linux» အထူးသဖြင့်၏လယ်ပြင်၌အချို့ကိစ္စများတွင်ကြီးသောအကူအညီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် သယံဇာတသုံးစွဲမှုငွေစုတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Trinity and Moksha: ၂ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
Apache CouchDB 3.0 ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည်
DragonFlyBSD 5.8 သည် DRM၊ virtual memory နှင့်အခြားအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်သည်